Repoblika Arabo Saharaoy Demôkratika - Wikipedia
Repoblika Arabo Saharaoy Demôkratika
Sainam-pirenen' ny Repoblika Arabo Saharaoy Demôkratika
Ny Repoblika Arabo Saharaoy Demôkratika ao Afrika
Ny Repoblika Arabo Saharaoy Demôkratika dia fanjakana ao Sahara Andrefana izay nanambara ny fahaleovanteny tamin' ny 27 Febroary 1976 tamin' ny alalan' ny Front Polisario, izay mametraka ny maha masi-mandidy azy amin' ny tanin' i Sahara Andrefana nefa tsy mifehy afa-tsy ny 20 %n' izany faritra izany. Ny 80 %n' io faritra io dia mbola fehezin' i Marôka izay mitaky koa ny maha masi-mandidy azy amin' io faritra io. Ny fianakaviambe iraisam-pirenena amin' ny ankapobeny dia mandà izany fahelaovan-tenan' ny Repoblika Arabo Saharaoy Demôkratika izany. Atao hoe الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية / Al-Jumhūrīyya al-`Arabīyya aṣ-Ṣaḥrāwīyya ad-Dīmuqrāṭīyya izy amin'ny teny arabo, fa República Árabe Saharaui Democrática kosa amin' ny teny espaniôla.
Amin' ny Firenena Mikambana dia faritra tsy manana fizakan-tena i Sahara Andrefana satria ny fanjanahana azy dia tsy mbola mifarana. Samy laviny na ny fisian' ny Repoblika Arabo Saharaoy Demôkratika na ny fiandrianan' i Marôka amin' io faritra io. Amin' ny Vondrona Afrikana anefa dia isan' ny firenena sy fanjakana afrikana ny Repoblika Arabo Saharaoy Demôkratika ka mpikambana feno ao amin' io vondrona io nanomboka tamin' ny taona 1982.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Repoblika_Arabo_Saharaoy_Demôkratika&oldid=1040816"
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:21 ity pejy ity.